यौन तथा स्वास्थ्य | NewsSudur
अहिले मुलुकभर डेंगुको संक्रमण फैलिएको छ । ५ हजारभन्दा बढी मानिस डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो। यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने संक्रामक रोग हो। डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित ‘एडिस एजिप्टाई’ जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्छ। यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी हुन्छन् ।…
कमजोर महशुस भयो ? यी खानेकुराले बढाउँछ प्रतिरक्षा शक्ति
रगतमा डब्लुबिसीको मात्रा कम हुँदा कमजोर महशुस हुन्छ । रिंगटा लाग्ने, खान मन नलाग्ने, आलश्यता बढी हुने, जिउ पुरै शिथिल तथा गलित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिरक्षा शक्ति बढाउने खानेकुरा खानुपर्छ । प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुँदा विभिन्न रोग लाग्ने खतरा बढी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउन शरीरमा…
रुपन्देहीमा जोखिमपूर्ण बन्दै डेंगुको संक्रमण
रुपन्देही– प्रदेश नम्बर ५ को रुपन्देहीमा डेंगुको संक्रमण जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । उपचारका लागि अस्पताल आउने बिरामीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्दा अधिकांशमा डेंगुको संक्रमण देखा पर्ने गरेको लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले जनाएको छ । रुपन्देहीमा डेंगुको संक्रमणबाट बच्न विभिन्न संघ संस्थाहरुले सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेपनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । इपिडिमियोलोजी…
हाम्रो तरकारी स्वादिलो बनाउन हामी लसुनको प्रयोग त गरिरहेका हुन्छौँ । तर, यसको औषधीय गुणका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । आयुर्वेदले त लसुनलाई औषधी नै मानेको छ । बिहान खाली पेटमा लसुन खाँदा झन् धेरै फाइदा हुन्छ । खाली पेटमा लसुन खानुका पाँच फाइदा यस्ता छन्- उच्च रक्तचापबाट…
सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन भन्छन्– डेंगुको संक्रमण अझै तीन महिना रहन सक्छ, सचेत बनौं
काठमाडौं– मुलुकभर डेंगुको संक्रमण बढेपछि जनमानसमा त्रास उब्जिएको छ । तर समयमै उपचार गरे डेंगु सहजरुपमा निको हुने चिकित्सकहरु सुझाउँछन् । डेंगुको लक्षण देखिना साथ अस्पताल गएर उपचार गर्न चिकित्सकको सुझाव छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले डेंगु हुँदैमा आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नहुने बताए । डा. पुनले लक्षण…
डेंगुबाट बच्ने उपायबारे ८० प्रतिशत बढी अनविज्ञ
काठमाडौं –पछिल्लो समय डेंगुको संक्रमणले मुलुकभर प्रकोपको रुप लिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार झण्डै ६ हजार डेंगुबाट संक्रमित भएका छन् । डेंगु रोगको बारेमा धेरैले सुने पनि यसको संक्रमणबाट कसरी बच्ने कमैलाई मात्र थाहा पाएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा ८० प्रतिशतलाई यो रोगबाट बच्ने…
खाना पचेन ? यो हो पचाउने उत्तम उपाय
हरेक मानिस स्वाद अनुसार विभिन्न परिकारका खानेकुरा खान्छन् । खानपानमा रुचि हुनेहरुले आफुलाई मनपर्ने परिकार पाएमा आवश्यकता भन्दा बढि समेत खाने गर्दछ । अझ खानपानको क्रममा खानेकुराको तालमेल नमिलाई खाइन्छ, जसले अधिकाशंलाई अपच हुने गर्दछ । समय तालिकाअनुसार नियमित खानपिन नगर्ने र लापरवाही गर्ने व्यक्तिलाई पाचन प्रकृयामा समस्या आउँछ र…
थाहा नै नपाई १४ वर्षीया बालिका गर्भवती
धनगढी, चैत १३ । १४ वर्षीया बालिका ‘थाहै नपाई’ गर्भवती भएकी छन्। पेटको तल्लो भागमा पीडा भएको बताएपछि आमाले उनलाई डाक्टरकहाँ पुर्‍याएकी थिइन्। भिडियो एक्सरे गर्दा गर्भ बसेको देखिएपछि उनको परिवार चिन्तामा परेको छ। मजदुरीमा जाने गरेकी आमाले छोरी बलात्कृत भइरहेको ढिलो मात्र थाहा पाएकी थिइन्। बालिकालाई थप स्वास्थ्य परीक्षणका…
सामुदायिक र निजी विद्यालयमा अनिवार्य नर्स राख्नु पर्ने, २० विद्यालयमा नर्स खटाईयो
यौन, प्रजननलगायत स्वास्थ्य चेतना र जाँचका लागि सरकारले विद्यालयहरूमै नर्स खटाउन सुरु गरेको छ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘पाइलटिङ प्रोजेक्ट’का रूपमा तत्काल प्रदेश ३ का २० विद्यालयमा नर्स खटाएको हो । बालबालिका घरबाहेक बढी समय विद्यालयमा रहने र उनीहरूलाई स्वास्थ्य समस्या पर्दा उपचार नभएपछि…
काठमान्डौको चन्द्रागिरीमा हिमपात हुँदै (फोटो फिचर )
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण काठमाण्डौ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भूभागमा बिहीबारदेखि वर्षा भैरहेको छ । मौसममा आएको बदलीसँगै काठमाण्डौको चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ परेको छ । हिउँ परेसँगै काठमाण्डौमा चिसो पनि बढेको छ । पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात भैरहेको पनि रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले…